Ahoana ny fampiasana Hashtags hampitomboana ny tanjaky ny fampielezan-kevitra | Martech Zone
Fomba fampiasana Hashtags hampitomboana ny tanjaky ny fampielezan-kevitra
Alarobia 31, 2016 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Jesse Quist
39% amin'ny orinasa aza manara-maso ny fampielezan-keviny ara-tsosialy ary mitarika amin'ny fotoana tsy tratrarina izany. Hasehoko anao ny fomba hanarahana mombamomba ny tenifototra mandritra ny hetsika, sy ny fomba azonao ampiasaina hananganana fampielezan-kevitra mivelatra. Zavatra roa no hifantohako:
Ny zava-dehibe mari-pandrefesana tokony ho vonona handrefy ianao rehefa manao fampielezan-kevitra tenifototra
Simple fitaka azonao ampiasaina hananana fanatrarana bebe kokoa
Fepetra lehibe momba ny fampielezan-kevitra sosialy
Ny ankamaroan'ny fanentanana ara-tsosialy dia natao hananganana fahatsiarovan-tena fa tsy handroahana fiovam-po eo noho eo. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia tsy maintsy hazavainao tsara ny tanjon'ny fampielezankevitrao sy ny metatra ilainao arahana mba hitsarana ny fahombiazana.
mampiasa Keyhole ny mpanara-maso kaonty, ho afaka ianao manara-maso ny soritr'ireto metrika ireto alohan'ny sy aorinao aorianao ny fampielezana tenifototrao.
Fitomboan'ny mpanaraka ary salan'isa fampiroboroboana manampy anao handrefy ny vokatra maharitra ateraky ny fampielezan-kevitry ny tenifototra amin'ireo mpikamban'ny vondrom-piarahamonina misy na vao azo.
Fa maninona ny fitomboan'ny mpanaraka no metrika fanentanana iray lehibe?
Ny fitomboan'ny mpanaraka dia mari-pahaizana hahatratrarana ny fampielezan-kevitra fidinao. Mampiseho izany fa nahatratra ny mpampiasa mbola tsy nifandray tamin'ny marikao ny fampielezankevitrao.
Mba handrefesana tsara ny fiantraikan'ny fampielezan-kevitrao dia soraty ny salan'isa fitomboana amin'ny herinandro mialoha ny hetsika. Avy eo, soraty ny fitomboana isan'andro eo aorian'ny hetsika.
[box type = "success" align = "aligncenter” class = ”” width = ”80%”] Ny hetsika avoakan'ny fahombiazana dia tokony hampiseho ny tahan'ny fitomboan'ny mpanara-dia mandroso mandritra ireo vanim-potoana ireo. [/ box]
Mandritra izany fotoana izany, ny tahan'ny fandraisana anjara dia manisa ny fahombiazan'ny hafatrao. Raha mandrisika ny hafatra atosikao sy ny mpankafy anao dia tokony ho hitanao ny fiakarana manodidina ny salan'isa fampiroboroboana amin'ny kaontinao.
Ity metrika ity dia famantarana ihany koa fa nanamboatra lasibatra ianao taorian'ny fanentanana tenifototra.
Ahoana no hahitanao ny fitomboan'ny mpanaraka?
Azonao atao ny manara-maso ireo metrika amin'ny alàlan'ny fitazonana takelaka havaozinao isan-kerinandro. Mila miditra ny fanovana ataon'ny mpanaraka ianao, miampy ny tahan'ny fandraisana anjara isan-kerinandro alohan'ny hetsika. Koa satria ny kaonty iray ihany no azonao arahana isaky ny ao anaty ny Twitter Analytics anaty fiara, ity fomba ity dia mety handany fotoana.
Hamela anao ao anaty haizina ihany koa izany raha manana ambasadaoron'ny marika manampy anao hampiroborobo ny fampielezan-kevitra - mila mamakivaky ny feed Twitter-nao tsirairay ianao mba hanangonana ny metimety fifamofoana rehefa manosika ny hafatrao izy ireo.
[box type = "info" align = "aligncenter" class = "" width = "80%"] Azonao atao ny mandeha ho azy ny fizotrany amin'ny alàlan'ny fampiasana fanadihadiana amin'ny media sosialy fitaovana toy ny Keyhole. [/ Efajoro]
Amin'ny Keyhole, azonao atao ny manara-maso kaonty marobe amin'ny toerana iray. Ny sehatra dia manara-maso ny fitomboan'ny mpanaraka alohan'ny sy aorian'ny fampielezan-kevitrao, manara-maso ny fahombiazan'ny masoivoho.
Zava-dehibe ny manara-maso ny refin'ny kaonty alohan'ny fampielezan-kevitra sy mandefa fampielezan-kevitra hahafantarana izay mandeha, inona no tsy mandeha ary hahitana ilay hafatra izay manakoako amin'ny mpihaino vao hitanao.
Inona avy ireo metrika tokony harahinao mivantana hijerena ny fiantraikan'ny fampielezankevitra tenifototrao?
Tsy ho vita ny fandrefesana ny fahombiazan'ny fampielezana tenifototra raha tsy misy fitaovana media sosialy toa Keyhole. Teratany Twitter Analytics Ny programa dia ahafahanao manara-maso atiny novokarin'ny tena fa tsy manome anao fidirana amin'ny fomba fampielezana ny tenifototra na teny lakolosy ampirisihinao manerana ny sehatra
Fepetra tokony harahi-maso mandritra ny fampielezan-kevitrao:
tonga - ny isan'ny olona tsy manam-paharoa mety hahita ny hafatrao.
fahatsapana - ny totalin'ny fomba fijery mety (ao anatin'izany ny mpampiasa mitovy mahita ny lahatsoratra mitovy matetika)
Exposure - mandrefy ny totalin'ny fahatsapana izay novokarin'ny mpampiasa iray, ao anatin'izany ny fiheverana vokarin'ny Retweeter-ny
Taham-pandraisana anjara - mandrefy ny fifandraisan-doha ateraky ny lahatsoratra noforonin'ny olona mirotsaka amin'ny tenifototra na teny lakile nataonao. Ity ny metrika ahafahanao manatsara ny fampielezan-kevitrao ary mampitombo ny fisondrotan'ny marika anao, amin'ny alàlan'ny fanatonana ireo influencer izay manana tahan'ny fifamatorana avo lenta dia hahafahanao manatona mpihaino marobe amin'ny tsenanao kendrenao.
Ity misy topy mason'ny Keyhole's Reach and Impressions Analytics:
[box type = "fampitandremana" align = "" class = "aligncenter" width = "80%"] Satria ny Twitter dia tsy manome ny kaontin'ny kaonty marina ho an'ny fitaovan'ny antoko fahatelo, ny tratra sy ny kajikajika dia mikainga amin'ny isan'ny fandaharam-potoana izay naseho ireo lahatsoratra. Ity isa ity dia antsoina hoe mety ho fahatsapana. Ny tena fientanam-po dia mety ho avy amin'ny 3% - 13% amin'ireo mety ho fahatsapana miankina amin'ny anton-javatra toy ny ora amin'ny paositra, teny lakile ary hetsika ataon'ny mpanaraka. [/ Boaty]
Fetsy tsotra hamoronana fanatrarana fampielezan-kevitra marobe
Alohan'ny hanombohana ny fampielezan-kevitrao dia ampiasao ny tenifototra sy ny mpanaraka teny fanalahidy hanaraka lohahevitra indostrialy malalaka mifandraika amin'ny hetsikao. Rehefa afaka andro vitsivitsy dia tokony ho hitanao ny kaonty izay mahazo ny fandraisana andraikitra betsaka indrindra amin'ny indostriao.
Mankanesa any amin'ireto olona ireto ary asao izy ireo handray anjara amin'ny fampielezan-kevitrao rehefa manomboka izany.
Ampiasao ny kaonty fitaovana hanara-maso ny kaontinao sy ny an'ny mpifaninana aminao. Io dia hahafahanao mahita ny atiny fampisehoana tsara indrindra sy ny fotoana fandefasana anao. Manatsara ny hafatrao manodidina ny atiny sy ny fehezanteny izay mahomby indrindra amin'ny mpihaino anao. Ampidiro tenifototra nahavita tantara tsara tao anatin'ny fampielezankevitrao.
[box type = "info" align = "aligncenter" class = "" width = "80%"]Pro Soso-kevitra: rehefa manangona influencers dia mitadiava olona mahazo fandraisana anjara 10 na mihoatra isaky ny lahatsoratra mifandraika. [/ efajoro]
Fampahafantarana: Manana fifandraisana amin'ny referral izahay Keyhole.
Tags: andraikitrahatsiakahetsiky ny mpanara-diahashtaganalytics momba ny tenifototrafampielezana tenifototrafampielezana tenifototrafiheverana tenifototrahahatratra ny tenifototrafahatsapanataham-pandraisana anjara amin'ny influencerkeyholetongafampielezan-kevitra ara-tsosialyfiaraha-moninafanarahana sosialyfifandraisan'ny media sosialymedia sosialy manarakafampahalalam-baovao sosialyfanatrarana ara-tsosialyTwitter
Jesse dia Keyholefitomboana sy fitarihana marketing. Manangana ny marika Keyhole izy amin'ny alàlan'ny famoronana fifandraisana matanjaka amin'ireo mpivarotra sosialy hafa ary tiany ny miresaka momba ny marketing.